Iifama zibambe indima ebalulekileyo ekusindeni kwezityalo . Bamba ukukhanya ukusuka elangeni nge-chlorophyll kwizityalo ze- chloroplast zezityalo kwaye basebenzise ukuvelisa ushukela. Ezinye izityalo ezinjengemithi yepine kunye namagqabi athile agcina amaqabunga awo unyaka wonke; abanye njengemithi ye-oki bechitha amaqabunga abo ebusika. Ngenxa yokunyuka nokubaluleka kwamaqabunga kwi- biomes ehlathini, akumangalisi ukuba izilwanyana ezininzi zizenzele njengamaqabunga njengendlela yokuzikhusela ukuze ziphephe iintshaba. Abanye basebenzisa amaqabunga amaqabunga okanye bafanise ukuxhamla. Ngezantsi ziimpawu ezisixhenxe zezilwanyana ezilinganisa amaqabunga. Ngexesha elizayo xa uthabatha iqabunga, qiniseka ukuba akukona okwenkcenkcesha.
Le mantan yeghost ibonakaliswe ngokukhenkceka kwayo okungenakwenzela ukubonakala kwamacembe omileyo afileyo. UDavid Cayless / Oxford Scientific / Getty Izithombe
I-Ghost mantis (i- Phyllocrania paradoxa ) inambuzane yezixhoba ziziguqula njengeziqabunga ezibola. Ukususela kumbala obomdaka ukuya emaphethini aphezukileyo emzimbeni nasemilenzeni, i-soul mantis idibanisa ngokupheleleyo kunye nendawo yayo. I-mantis inomdla wokutya iintlobo ezinambuzane ezibandakanya iziqwenga kunye nezinye iintlobo ezinambuzane ezindizayo, iimvumba zokutya kunye namakhwenethi. Xa kusongelwa, kuya kubakho ukulala ngaphandle komhlaba kwaye ungashukunyanga nokuba uthinteke, okanye uya kubonisa ngokukhawuleza amaphiko ayo ukuba abesabe. I-soul mantis ihlala kwindawo evulekileyo, imithi, amahlathi kunye nezihlahla eziseAfrika naseMzantsi Yurophu.
I-Indian Leafwing Butterfly
Amaphiko avaliweyo e-Indian Leafwing butterfly afana nesimo kunye nombala weqabunga elimeleyo ngokugqibeleleyo. UMoritz Wolf / Getty Izithombe
Naphezu kwegama layo, i-Indian Leafwing ( Kallima paralekta ) ivela e-Indonesia. Ezi bhotela ziziqhayisa njengamaqabunga afile xa zivala amaphiko azo. Bahlala kwimimandla yasemahlathini aseTropiki kwaye beza kwiindidi ezahlukahlukeneyo eziquka imvi, emdaka, obomvu, ohlaza okomnquma, kunye nebala eliphuzi. Ukuthungqwa kwamaphiko abo kufana neempawu zamagqabi afana ne-midrib kunye ne-petioles. I-shading ihlala iqulethe iindiza ezifana nezifo okanye ezinye iifungi ezikhulayo kwiintsuku ezifileyo. Esikhundleni sokutya imbali yentyatyambo, i-Indian Leafwing ikhetha ukutya izityalo ezibolileyo.
Le ntwaba yeGaboon ixutywe ngamagqabi ehlathini. AmaGallo Izithombe-Anthony Bannister / Photodisc / Getty Izithombe
Inyoka yeGaboon (i- Bitis gabonica ) inyoka inokufumaneka kwiindawo ezisehlathini zaseTropiki e-Afrika. Esi sidalwa esiphezulu siphezulu kwisitya sokutya . Ngeemfumba zayo ezinkulu kunye nomzimba omane ukuya kwimihlanu, le ntombazane enomdla inqwenela ukubetha ebusuku kwaye ihamba ngokukhawuleza ukuze igcine isikhokelo sayo ngelixa ihamba. Ukuba ibona inkathazo, inyoka iya kufaka ukuzama ukufihla phakathi kwamagqabi afileyo emhlabathini. Umbala walo umbala wenza ukuba kunzima inyoka ukuba ikwazi ukubona izibini kunye nezixhoba. Inyoka yeGaboon idla ngokutya kwiinyoni kunye nezilwanyana ezincinci .
I-Satanic Leaf-Tailed Gecko
Le Gecko yeLeaf-tailed ixelisa iqela kwisebe. G & M Therin Wee / robertharding / Getty Izithombe
Ekhaya ukuya kwisiqithi saseMadagascar, i-gecko ye-leaf-tailed gecko (i- Uroplatus phantasticas ) ichitha iintsuku zayo ixhomekeke kumasebe emvula yamanzi . Ngelo busuku, idla ukutya okubandakanya iikhilikiti, iimpukane, izicabungulu, imikhombe kunye nemisipha. Le gecko iyaziwa ngokubonakala kwayo ngokuphawulekayo kwiphepha elimhlophe, elinceda lihlale litshitshiswa ngelilanga ukusuka kwizilwanyana ezixhamlayo kwaye lifihliwe ebusuku ebusuku. I-geckos ye-Leaf-tailed ithatha imizila enobudlova xa isongelwa, njengokuvula imilomo yabo ngokubanzi kwaye ikhuphe ukukhala okukhulu ukukhusela izisongelo. Kaninzi "
Kunzima ukubona i-Amazonian Horned Frog phakathi kwebala leqabunga lehlathi ngenxa yembala. Umlomo wayo u-1.5 ububanzi ngaphezu kobude bomzimba wakhe. URobert Oelman / Umama Ovulekile / i-Getty Izithombe
I-Amazonian frog (i- Ceratophrys cornuta ) yenza ikhaya layo emahlathini aseMzantsi American. Imibala yabo kunye nophondo-njengamaniselo enza ukuba la maxoxo akwazi ukuhlula ukusuka kumagqabi ajikelezileyo emhlabeni. Amaxoxo ahlala ehlutha emagqabini ukuba afune ukuxhamla amaxhoba afana namaqabunga amancinci, amagundane kunye namanye amaxoxo. Amazonian amaqabunga anamaqhinga kwaye azama ukutya malunga nantoni na ehamba emilonyeni yawo emikhulu. Amazone ama-Amazonian ama-horned ama-hormones awayeyaziwayo.
Lezi zinambuzane zeqabunga ziluhlaza kwaye zifanisa ukubukeka kweqabunga. Ezi nambuzane zihamba ngesantya esinqumlayo kwaye ibhinqa libukeka lifana ne-toy clockwork xa ihamba. UMartin Harvey / Gallo Images / Getty Izithombe
Inambuzane ye-Leaf (i- Phyllium philippinicum ) inobanzi, iiflethi kwaye ibonakala njengeqabunga. Inambuzane yamaLeaf ihlala emahlathini aseMzantsi Asia, iinqithi zaseLwandle lwaseNdiya kunye ne-Australia. Ziba nobukhulu besuka kwi-28 mm ukuya kwi-100 mm kunye namabhinqa ngokuqhelekileyo aphezulu kunamadoda. Iimpawu zomzimba ezinambuzane zeeafisi zifana nembala yamaqabunga kunye nezakhiwo ezinjengeemvini kunye ne-midrib. Bangakwazi ukulinganisa amaqabunga abonakaliswe kuwo awamanqaku kwiindawo zomzimba ezibonakala njengezimbobo. Ukunyuka kweentlobo zeeafisi kukuxelisa ukuba iqabunga likhwela ukusuka kwicala ukuya kwelinye icala njengokubanjwe ngomoya. Ukubonakala kwazo kwamagqabi kubancedisa ukuba bafihle kwizilwanyana . Inambuzane yeeafisi ivelisa ngesondo, kodwa amabhinqa angaphinda avelise yi- parthenogenesis .
Le katydid ibonakalisa iimpawu zobuqhopho obuyingxenye yeqabunga layo elilinganisa ukulinganisa. URobert Oelman / Moment / Getty Izithombe
IiKydidids, ezibizwa ngokuba njengeengqungquthela ezinamaxesha amade, zithatha igama labo kwisandi esiyingqayizivele esenzayo ngokugubha amaphiko abo ndawonye. Ingxolo yabo isandi nje ngeesilayidi "ka-ty-did". AmaKatydids bakhetha ukutya amaqabunga emithini kunye neengqithi ukuze baphephe abantu. AmaKatydids afanisa amaqabunga ngokuchanekileyo. Baphethe iigulane eziphathekayo kunye namanqaku afana nemifuno yamagqabi kunye namabala okubola. Xa besoyika, ama-katydids aya kuhlala esenethemba lokuphepha. Ukuba besongelwa, baya kubhabha. Abaxhamli beezinambuzane baquka izigulane, amaxoxo , iinyoka kunye neentaka. IiKydidids zifumaneka kwiindawo zehlathi kunye namanqatha eNtshona Melika.
Icandelo leMveliso yeziMayile
5 Amacandelo asetyenziswayo ukulungisa i-Pollinators
UkuHlola, ngoRobert Louis Stevenson
Ubugcisa beDart - Ukukhetha iDart Best Dart kuwe
Iimfundiso zeCawa zeNtshumayelo zeVangeli kunye neZenzo
Iimfazwe zeMfazwe eziPhambili kunye eziPhambili kunamaQela aKhethekileyo
Yayiyiphi 'iCape' yeGolf Club?
Iingongoma Ngomlando WaseGrike Wangaphambili
Ukuqokelela ulwazi malunga nokuziphatha okujoliswe kuko
Indlela yokwenza i-360 Surface Spin ngexesha loWakesurfing
Imizekelo yokuBela abaFundi besiNgesi
I-Pentatonic Scale eMancin
Inyaniso, Ukuqonda, kunye neNdima yoMculi